रमाइलो खबर « रंग खबर
रंगखबर, काठमाडौँ – झापा विर्तामोडमा विवेश राई नेपाल इन्टरनेशनलले आयोजना गरेको फेशन एण्ड मोडेल अवार्डमा इमरीजंग फेशन डिजाइनका रुपमा टप फाइपमा छनौट भएका छन्। आउँदो श्रावण २३ गते काठमाण्डौंको राष्ट्र
रंगखबर, काठमाडौँ – सन् २०१६ मा जन्म भएको एप ‘म्युजिकल डट ली’ सर्वाधिक लोकप्रिय एपहरुमा पर्छ । अहिले नाम परिवर्तन भएर यसलाई ‘टिक टक’ रुपमा चिनिन्छ । गत २ वर्षमै यसले १
रंगखबर, काठमाडौँ- म्यूजिकल्लीदेखी डकुमेन्ट्रीसम्म ‘सोसल मिडिया फिल्म अवार्ड २०७५’ आयोजना हुने भएको छ। ‘ड्रिम वर्ल्ड अफ फिल्म मेकर्स’को आयोजनमा अवार्ड हुने भएको हो। छोटो समयको सन्देशमूलक चलचित्र निर्माण गरि सामाजिक
रंगखबर, काठमाडौँ- विगतका केही महिना देखि यूटयूबमा निकै नै चर्चा कमाउँदै आएको नेप(ग्याजम स्टयाण्ड(अप कमेडी सो ले सेलिब्रेटी म्यानेजमेन्ट नेपालसँगको संयुक्त आयोजनामा यही श्रावण १९ गते शनिवारको दिन लाइभ स्टयाण्ड–अप
जसले हास्न बाध्य बनाए
रंगखबर, काठमाडौं । नेप–ग्याजम स्टयाण्ड–अप कमेडी शो र सेलिब्रेटी म्यानेजमेन्ट नेपालले संयुक्त रुपमा ‘लाइभ स्टयाण्ड–अप कमेडी शो सिजन–२’ आयोजना गरेको छ । राजधानीको झम्सिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा लेखमणि त्रिताल, सहर्ष केसी, रुपक
रंगखबर, काठमाडौँ– लुकेको प्रतिभालाई जागरुक गर्ने उदेश्यले संचालन हुन लागेको रियालिटी शो नेपाल्स सिङगिङ्ग एण्ड डान्सिङ्ग सुपरस्टारको औपचारिक घोषणा भएको छ। सनराज ईन्टरटेमेंटले आयोजना गर्न लागेको उक्त रियालिटी शोमा देशभर
कस्तो अचम्म ! २० जना ब्वायफ्रेन्ड बनाएर घर किनिन् युवतीले
रंग खबर, काठमाडौँ | पैसानै नभएको व्यक्तिले पैसा कमाएर एउटा घर किन्न कति समय लाग्ला ? पक्कै पनि सजिलो हुनेछैन । तर चिनकी एक युवतीले निक्कै छोटो समयमा पैसा जुटाएर घर
रंग खबर, काठमाडौँ | हिन्दु धर्ममा मन्दिरमा जुत्ता, चप्पल लगाएर भित्र छिर्न नपाइने कुरा त तपाई हामिलाई थाहा भएकै कुरा हो । मन्दिरहरुमा तपाइँले जुत्ता लगाएर छिर्नु भयो भने देख्ने जो
रंग खबर, काठमाडौँ । नेपालको सन्दर्भमा सामान्यतया महिलाहरुको उचाई ५.०३ देखि ५.०५ सम्म हुने गर्दछ । विश्वमा अनेक कुराका रेकर्डहरु हुने गर्दछन । रेकर्डहरु आफैमा खुल्दुलीका बिषय हुन् । प्राय मानिस बिभिन्न खाले रेकर्डका
कस्तो अचम्म ! आमा माथि सौता गएर आफ्नै बाबुको बच्चा जन्माउन चाहन्छिन यी युवती
रंग खबर, काठमाडौँ | आमा-बुबाको कोखबाट बच्चा जन्मिन्छ । आमा बुबाको माया बच्चामाथि कस्तो हुन्छ त्यो भनिरहनु नपर्ला । आमा-बुबाले पालनपोषण गरेर छोराछोरीलाई ठुला बनाएर कन्यादान गरेको त देख्नु त भएकै होला ।